जो नेपाली नोटका डिजाइनर थिए… – दैनिक नेपाल न्युज
कलाका शुभचिन्तक विश्वनाथ भेटवाल २०१९ सालतिर पलाञ्चोक भगवती स्कुल काभ्रेमा पढाउनुहुन्थ्यो । नेत्रबहादुर थापाले लेखेको चार कक्षाको भूगोल पुस्तकमा थियो । नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको चित्र । त्यसमा सलल बग्दै गरेको कर्मनशा, वाग्मती, विष्णुमती नदी प्रष्टै झल्किन्थ्यो । उक्त चित्रमा रहेको फूलचोकी, शिवपूरीको सुन्दर दृश्यले लोभ्याउँथ्यो । उक्त सजिव चित्रमात्रै होइन अहिले चल्तीमा रहेको सुन्दर र आकर्षक देखिने नेपाली नोट होस् या स्वस्थानी ब्रतकथाको पुस्तकमा रहेका चित्रहरु नै किन नहुन् ।
नेपाली कला क्षेत्रका मूर्धन्य कलाकार केशव दुवाडीको योगदान राष्ट्रका लागि अतुलनीय छ । विराटनगरमा १९७८ मङ्सिरमा जन्मिइ २०५३ साल पुस १८ गते निधन हुनुभएका दुवाडीको जीवनकाल नै कला साधनामा बितेको थियो । “धेरै छ दुवाडीका योगदान, न राज्यले खोज्न सकेको छ, न उहाँका शुभचिन्तकले नै, स्वस्थानीमा हेर्नुहोस्, नेपाली नोट नै भन्नुस्, जीवन्तता केमा कमी छ ? उहाँलाई सम्झनै पुगेन”, भेटवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानले दृश्य चित्र, व्यक्ति (मुहार) चित्र, दृष्टान्तचित्र, स्वस्थानी कथामा आधारित धार्मिक चित्रसहित उहाँका योगदान र जीवनी बुझाउने उद्देश्यले वृत्रचित्र नै तयार पारेको छ । झण्डै आठ महिना लगाएर रु एक लाखको लागतमा वृत्रचित्र निर्माण गरेको लेखक तथा निर्देशक रमेश खनालले बताउनुभयो । “यसले केशव दुवाडी को हो ? भन्ने चिनारी दिन्छ, तर उहाँको योगदानलाई हामीले बिर्सनु भएन, यस्ता कलाकार ओझेलमा छन्, उहाँहरुलाई राज्यले र चेलाहरुले सम्झनु पर्छ ।” खनालले थप्नुभयो ।
तत्कालीन अवस्थामा श्री ५ वीरेन्द्र अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन ललितकला संस्था (हाल नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान)मा आठ वर्ष उपाध्यक्ष र दुई वर्ष सल्लाहकार भएर काम गर्नु भएको थियो । ग्राफिक्समा दख्खल भएका, धार्मिक सोचका र विचारले प्रष्ट दुवाडीका चित्रहरु ठूलो वर्णमाला, पाठ्यपुस्तकमा धेरै समावेश भएका छन् । विगतमा उहाँको योगदान प्रशंसायोग्य रहेको स्मरण गर्दै वरिष्ठ मूर्तिकार तथा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति ठाकुरप्रसाद मैनालीले दुवाडीको योगदान स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “राजा वीरेन्द्रको अगाडिसमेत नाईँ भन्न सक्ने मान्छे ।” उहाँ धेरै काममा दुवाडीसँगै काम गर्नुभएको थियो ।
सुविधा नभएको बेलामा समेत उहाँका प्रष्ट चित्रले धेरैलाई प्रभावित बनाउँथ्यो । काठमाडौँको गौरीघाटमा उहाँको घर मै ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सङ्ग्रहालय स्थापना गरेर दुवाडीको योगदानलाई ताजा बनाएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाफा) का कुलपति कान्छाकुमार (केके) कर्माचार्यले उहाँले बनाएको मुहारचित्र सजीव र सुन्दर तथा जीवन्त रहेको स्मरण गर्नुभयो ।